ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသူ (သို့) လုပ်ငန်းအတူလုပ်လိုသူများအနေဖြင့် အခြေခံဗဟုသုတအသိပညာ လိုအပ်ပါသည်။
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လူကြီးမင်းအတွက် လိုအပ်နိုင်သော အခြေခံအကြောင်းအရာများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဤအခန်းကဏ္ဍတွင် စုစည်းဖော်ပြထားပါသည်။ ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံဗဟုသုတအချက်အလက်များကို လေ့လာပေးပါ။
လူကြီးမင်း၏မေးခွန်းအတွက်အဖြေကို မကြာမီအချိန်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ ဤအခန်းကဏ္ဍတွင် သေချာဖြေကြားပေးပါမည်။
1 . ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကို ရရှိခံစားနိုင်ပါမည်လား။
အထူးကိုယ်စားလှယ်အစီအစဉ်အရ ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကို ခံစားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
2 . ငွေသွင်းငွေထုတ်အတွက် ၀န်ဆောင်ခ မည်မျှပေးချေရန်လိုအပ်သနည်း။
ငွေအလွှဲအပြောင်းအတွက် ကုမ္ပဏီမှ ၀န်ဆောင်ခ ကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။
3 . ငွေပေးချေမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အများဆုံးပမာဏမှာ မည်မျှနည်း။
ငွေပေးချေမှုတန်ဖိုးမည်မျှကိုမဆို လူကြီးမင်းအနေဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ၁ ဒေါ်လာအောက် မဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
4 . အနည်းဆုံးပေးချေနိုင်သည့်ပမာဏမှာ မည်မျှနည်း။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အနည်းဆုံးပေးချေနိုင်သည့် ပမာဏ ၁ ဒေါ်လာမှ စတင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
5 . ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်ကို မည်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်နည်း။
ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်ကို ရက်သတ္တပတ်၏ မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
6 . ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအစီင်္အစဉ်မှ အကျိုးအမြတ်ငွေကို မည်သည့်နေ့တွင်ရရှိနိုင်မည်နည်း။
အကျိုးအမြတ်ငွေများကို ရုံးဖွင့်ရက်များတွင်သာ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
7 . ငွေထုတ်ယူလိုမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် အချိန်မည်မျှကြာမြင့်နိုင်သနည်း။
ငွေထုတ်ယူလိုမှုဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်ကို ဆောင်ရွက်ချိန်မှာ ၇၂ နာရီအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ ရုံးပိတ်ရက်များနှင့် အားလပ်ရက်များအတွင်း၌တောင်းဆိုထားသော ငွေထုတ်ယူလိုမှုအပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမှုသည် အနည်းငယ်ပိုကြာနိုင်သည်ကို သတိပြုစေလိုပါသည်။
8 . မည်သည့်အချိန်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းမည်နည်း။
လူကြီးမင်းရွေးချယ်ထားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက "ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု" အခန်းကဏ္ဍတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
9 . ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်ချိန်တွင် မည်သည့်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များဖြစ်သည့် Perfect Money, Payeer, Advanced Cash အပြင် အခြေခံ Altcoin များဖြစ်သည့် Bitcoin, Ethereum, Litecoin များကိုလည်း ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
10 . ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးကို အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါမည်လား။
11 . ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုတည်းကို အသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမည်မျှ ပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက "ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု" အခန်းကဏ္ဍတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
12 . ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစတွင် ခွင့်ပြုထားသော အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် Bitcoin အနည်းဆုံးပမာဏများကြား အဓိကခြားနားချက်မှာ မည်သို့နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီင်္းမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်များကို အမျိုးအစား ၃ မျိုး ခွဲခြားထားပြီး ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လုံးဝသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုအသုံးပြု၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုပါက အထူးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်အစုတွင် အနည်းဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ မှ စတင်ထည့်ဝင်နိုင်ပြီး bitcoin ကို အသုံးပြု၍ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုပါက CRYPTO ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအစုတွင် အနည်းဆုံး ၀.၁ bitcoin မှစ၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်ပါသည်။
13 . ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစတင်ဆောင်ရွက်ရန် အနည်းဆုံးလိုအပ်သော ပမာဏမှာ မည်မျှနည်း။
ကုမ္ပဏီတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀ သို့ ၀.၁ Bitcoin ထည့်ဝင်၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်နိုင်ပါသည်။
14 . ထည့်ဝင်ထားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေအပေါ်တွင် အရင်းအနှီင်္းထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ပါမည်လား။
ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအခြေအနေတွင် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အထူးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်များအစုကို အသုံးပြုခဲ့ပါက လူကြီးမင်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသက်တမ်းကို ယနေ့တွင်စတင်သည်ဟူ၍ ပြန်လည်ရေတွက်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းနောက်တွင် စနစ်က ယခင်ရှိပြီးသောအရင်းအနှီးနှင့် ထပ်မံပေါင်းထည့်သောပမာဏကိုအလိုအလျောက် စုစည်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပေါင်းထည့်ပြီးနောက်ရရှိလာသောပမာဏသည် လူကြီးမင်းယခင်တည်းက အသုံးပြုခဲ့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်အတွက် ခွင့်ပြုပေးနိုင်သောပမာဏနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါက ဖော်ပြပါအရင်းအနှီးများနှင့်ကိုက်ညီသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အတွက် အလိုအလျောက် ပြောင်းရွှေ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစနစ်သည် ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် CRYPTO ဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကမ်းလှမ်းချက်များအစုတွင် လူကြီးမင်းထပ်မံပေါင်းထည့်သော ပမာဏများအတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ခြွင်းချက်အနေဖြင့် ဖော်ပြပါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်နှစ်ခုလုံးတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည့် အခြေအနေမျိုးတွင် ယခင်ရှိပြီးသောအရင်းအနှီးသို့ ထပ်မံပေါင်းထည့်ခြင်းသည် လူကြီးမင်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက် သက်တမ်းမတိုင်ခင်အထိ အသုံးပြုထားသောရက်များကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
15 . လူကြီးမင်း၏ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ၀င်ငွေမည်မျှရရှိနိုင်မည်နည်း။
ယေဘုယျအားဖြင့် ၀င်ငွေရရှိနိုင်သည့် ပမာဏကို ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ၀င်ငွေရရှိလိုမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ တိုးတက်လိုမှုအပေါ် လူကြီးမင်း၏ ဆန္ဒပြင်းပြမှုနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက "ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု" အခန်းကဏ္ဍတွင် ၀င်ရောက်လေ့လာရန် အကြံပြုလိုပါသည်။
16 . အသက်ဝင်သော အကောင့်တစ်ခုထက်ပို၍ပြုလုပ်ပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
မျှတမှုမရှိသော အပိုဝင်ငွေကို ရရှိလို၍ အကောင့်များစွာဖန်တီးခြင်း (ဥပမာ - အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအတွက် ချီးမြှင့်ငွေကို ပိုမိုမြှင့်တင်ခြင်း) ကြောင့် ထိုအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ၏ အသက်ဝင်သောအကောင့်၊ အသက်ဝင်ခြင်းမရှိသောအကောင့် အားလုံးကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာဆောင်ရွက်မှုရှိသော အကောင့်များအဖြစ်သတ်မှတ်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
17 . ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မည်မျှပြုလုပ်နိုင်ပါမည်နည်း။
ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါက ထိုအကောင့်သည်အသက်ဝင်နေမည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမပြုလုပ်ပါက အသက်ဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုသာ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။ အသက်ဝင်ခြင်းမရှိသော အကောင့်များပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်လည်းမဟုတ်ပါ။
18 . ကုမ္ပဏီ၏၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် မှတ်ပုံတင်ရန် မလွဲမသွေ လိုအပ်ပါသလား။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုခြင်း (သို့) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်များဖန်တီးခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း (ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်း) ကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
19 . ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကို သတ်မှတ်ချိန်မတိုင်မီ် ရပ်ဆိုင်းနိုင်ပါမည်လား။
မဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းအခွင့်အလမ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးထားခြင်းမရှိပါ။
20 . ကွန်ရက်စနစ်ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါမည်လား။
ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ၎င်းအခွင့်အလမ်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးထားပါသည်။
21 . ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ကို တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုထားခြင်းရှိပါသလား။
ရှိပါသည်။ Aquilon.trade သည် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီး နိုင်ငံအတွင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှသတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော စီးပွါးရေးဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေများဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
22 . ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခြေခံဦးတည်ချက်များမှာ မည်သို့နည်း။
ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများ၊ ကြိုရောင်းကြိုဝယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းအစုရှယ်ယာများ၊ ချက်လက်မှတ်များ၊ ဘေလ်များ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းများတွင် ငွေကြေးရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီးနောက် ပုံမှန်အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး တချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းဆောင်ရွက်ချက်ကို ထူးကဲသော အကျိုးကျေးဇူးပိုမိုဖြစ်ထွန်းစေသော Cryptocurrency ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
23 . ကုမ္ပဏီတွင် အကျိုးအမြတ် မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ထွန်းစေသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆင်တူမရှိသေးသည့် စီးပွါးရေးစနစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ထားပြီး ၎င်းကိုအခြေခံ၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များပါဝင်သည့် သမားရိုးကျစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၈၀% နှင့် အကျိုးအမြတ်ပိုမိုဖြစ်ထွန်းကောင်းမွန်သော စီးပွါးရေးဆိုင်ရာဦးတည်ချက်များအတွက် ၂၀% ဟူ၍ အချိုးကျ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး ငွေကြေးလည်ပတ်စေပါသည်။
၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော အသုံးပြုသူနှင့် ကုမ္ပဏီကြား အပြန်အလှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စဉ်ကို ဦးတည်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ကုမ္ပဏီ၏၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုထားသည့် မည်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက်မဆို အကျုံးဝင်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လျစ်လျူရှုခြင်း (သို့) မှားယွင်းစွာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများသည် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ရပ်ဆိုင်းနိုင်သည့် အခြေခံအချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏၀က်ဘ်ဆိုဒ်၊ ၀န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်များကို အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မပြုလုပ်မီ ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများတွင်ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများနှင့် အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာစွာလေလာရန် လေးနက်စွာတိုက်တွန်းလိုပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်မီ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သေချာစွာ လေ့လာပါ။
၁) စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လက်တွေ့အချက်အလက်များအရ ရေးဆွဲထားပါသည်။
၂) အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီးသူများသာ မှတ်ပုံတင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃) ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ် (သို့) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်လိုသောသူတိုင်းသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရန် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
၄) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အချက်အလက်များကို လိုက်နာမည်ဟု သဘောတူခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
၁) ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို သာမန်အချက်အလက်များအဖြစ်သာ နားလည်သဘောပေါက်ရမည်ဖြစ်ပြီး တိကျသော ရည်မှန်းချက်များတွင် (သို့) တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုတိုင်းတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော မည်သည့်အာမခံမှ ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။
၂) ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ပါအကြောင်းအရာကို ဥပဒေ၊ အာမခံ၊ အခွန်နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ မေတ္တာရပ်ခံချက်များနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားသော မည်သည့်အကြံပြုချက်ကိုမဆို အကြံပြုချက်စိတ်ကူး (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ တိုက်ရိုက်အကြံပြုချက် (သို့) အခြားသူများ၏အကြံပြုချက်များအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ Aquilon.trade ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ ဆုံးရှံးမှု (သို့) နစ်နာမှုများအတွက် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မှ တာဝန်မရှိပါ။
၃) မာတိကာပုံစံတွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်လောက်သော၊ လုံလောက်သော၊ အပြည့်အ၀မှန်ကန်သော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့မှ အတည်ပြုထားသော အချက်အလက်များဟု အပြည့်အ၀မဆိုနိုင်ပါ။ ငွေကြေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များကို မဆောင်ရွက်မီ "တာဝန်ခံမှုမှငြင်းဆိုခြင်း" အပိုင်းကို သေချာစွာလေ့လာပါ။
၁) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတိုင်း၊ ငွေအရင်းအနှီးတိုင်း (ကုမ္ပဏီ၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းချက်) ကို ကုမ္ပဏီနှင့် သုံးစွဲသူများ(အနာဂတ်၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ) အကြား ပုဂ္ဂလဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။
၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များအားလုံးကို ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်ကြောင်း အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် သဘောတူညီပြီးဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူအားမှီခိုခြင်းမရှိဘဲ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူကိုယ်တိုင်သာလျှင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည့်ပမာဏနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးအစားကို ကြည့်ရှုဆုံးဖြတ်ရပါသည်။
၃) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးအတွက် အတိုးနှုန်းကို အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်စဉ် ၊ အရင်းအနှီးထည့်ဝင်စဉ် ရွေးချယ်အသုံးပြုထားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ အကောင့်၏လက်ကျန်ငွေပေါ်တွင် တွက်ချက်စာရင်းသွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄) အတိုးနှုန်းသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏ၊ ရွေးချယ်ထားသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးအစားနှင့် ၎င်း၏အကျုံးဝင်သောသက်တမ်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။
၅) အထူးကိုယ်စားလှယ် အစီအစဉ်မှ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်အစုများ၏ ရင်းနှီးငွေသတ်မှတ်အချိန်ကာလများကို အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသောငွေကြေးအတိုင်းအတာပေါ်တွင် ငွေကြေးထပ်မံထည့်သွင်းရင်းနှီးမှုပြုလုပ်ချိန်၌ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၆) ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအနေဖြင့် အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်များဖြစ်သည့် Perfect Money, Payeer, Advanced Cash အပြင် အခြေခံ Altcoin များဖြစ်သည့် Bitcoin, Ethereum, Litecoin များကိုလည်း ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၇) ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ "ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု" အခန်းကဏ္ဍသည် အခြားကဏ္ဍများနည်းတူ ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူကြား ဆက်ဆံရေးအားလုံးကို ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ထိန်းညှိပေးထားသည်။
၁) ကုမ္ပဏီ၏ မည်သည့်အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူမဆို အထူးကိုယ်စားလှယ်အစီအစဉ် (SRP) နှင့် ခေါင်းဆောင်မှုအစီင်္အစဉ်(LP) မှတဆင့် လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ အခြားသောအခွင့်အရေးများကိုလည်း အကျိုးကျေးဇူးခံစားခွင့်ရှိသည်။
၂) စီးပွါးရေးဆိုင်ရာအကြောင်းကြားချက်များကို ကွန်ရက်ပေါ်တွင်ပြသခြင်းနှင့် အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းကို တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။ ၎င်းတွင် ကိုယ်စားလှယ်လင့်ခ်များ တည်ဆောက်ခြင်းလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ တူညီကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်မျိုးနှင့် စီးပွါးရေးဆိုင်ရာအကြောင်းကြားချက်များကို ကွန်ရက်ပေါ်တွင်ပြသခြင်းနှင့် အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းနည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းကို အတည်ပြုနိုင်သည့်ကိစ္စရပ်မျိုးတို့တွင် ထိုအကျိုးတူပူးပေါင်းသူ၏ အကောင့်ကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းမရှိဘဲ ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
၁) ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ရှိအကြောင်းအရာများကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ခေတ်နှင့်အညီ မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်း (သို့) ပြင်ဆင်ခြင်းစသည့် လိုအပ်ချက်များကြောင့် ၎င်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် သတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ပေးသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ရပ်ဆိုင်းရခြင်းသည် ငြင်းဆန်ရန်မဖြစ်နိုင်သော တွန်းအားပေးသည့်အခြေအနေများအပြင် အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေပါသည်။
စနစ်မြှင့်တင်မှု အရေးပေါ် ပြုလုပ်ခြင်း
အခြားသောနည်းပညာဆိုင်ရာ(သို့) အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိခိုက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
၂) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏၀က်ဆိုဒ်ကို ၀င်ရောက်ရန် ယာယီအားဖြင့် မဖြစ်နိုင်ခြင်းအပါအ၀င် ထိုသို့ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အဆင်မပြေမှုများ၊ ပြဿနာများကို တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူမှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော သတင်းအချက်အလက်များသည် ကုမ္ပဏီနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူကြားဆက်ဆံရေး၏ မလွဲမသွေလိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူထံမှလက်ခံရရှိထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ယုံကြည်စိတ်ချရစွာ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းအီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ အီလက်ထရောနစ်စနစ်သုံးဖိုင်များနှင့် အခြားအချက်အလက်များသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်မှပေါက်ကြားမည်မဟုတ်ပါ။
၂) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ၏ ကုမ္ပဏီနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ လုံခြုံစိတ်ချရမှုအတွက် လိုအပ်သောဆောင်ရွက်ချက်များ ဆောင်ရွက်လျက် ယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အခြေအနေတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဆက်လက်၍လည်း ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁) အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် ၎င်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပါအချက်များကို လေးစားလိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ လျစ်လျူရှုခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ယူဆချက်ဖြင့် အဓိပွါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများသည် စေ့စပ်စွာစောင့်ကြည့်မှု၊ အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုနှင့် အကောင့်ကိုလက်တွေ့ရပ်ဆိုင်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ခြင်းများ၏ အစပင်ဖြစ်ပါသည်။
၂) ကြိုတင်အသိပေးခြင်းနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ၏ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိဘဲ ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများက ကုမ္ပဏီ၏၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေသည့်ကိစ္စရပ်မျိုးတွင် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူသည် အပြည့်အ၀လက်ခံလိုက်နာရန်လိုအပ်သည့် အပြောင်းအလဲများနှင့် နောက်ဆုံးအခြေအနေများကိုသိရှိပြီး ၎င်းအချက်အလက်များကိုသဘောတူညီသည့် အချက်တစ်ချက်အဖြစ် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မှတ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အစီအစဉ်တွင် အရင်းအနှီးထည့်ဝင်ပြီးနောက်တွင် ကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်အထမြောက်အောင်မြင်စေရန်နှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို အပြည့်အ၀ပေးအပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သော ကိုယ်ရေးအပြည့်အစုံအပါအ၀င် အချို့သောအချက်အလက်များကိုပေးရန် မိမိဆန္ဒအလျောက်သဘောတူပြီးသဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီဘက်မှလည်း ထိုထောက်ပံ့ပေးထားသောအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအတွက် ကောင်းကျိုးကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု အာမခံပါသည်။
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူမှပေးပို့ထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုမဆို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ဘဲ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေသဘောတရားကိုမျှပင် စဉ်းစားပေးသွားမည်မဟုတ်ပါ။
အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်းကို လက်ရှိဥပဒေအရဆောင်ရွက်ခြင်းက အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအကြား ဥပဒေကြောင်းအရဆက်ဆံရေးကို တိုက်ရိုက်လည်ပတ်စေပြီး ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်သတ်မှတ်ချက်များ၊ လူ့အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ခိုင်မာစေပါသည်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အရ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ်တွင် ကုမ္ပဏီမှတိုက်ရိုက်တောင်းခံနိုင်သော အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် အခြားသောအချက်အလက်များသည် အထူးယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည့်အခြေအနေရှိပြီး ၎င်းကို မည်သည့်အခြေအနေတွင်မှ အခြားသူထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက အာမခံပါသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ကုမ္ပဏီ၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားသည်ဖြစ်စေ ပြုလုပ်မထားသည်ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကျိုးပေါက်မှုမဖြစ်စေရန်နှင့် လုံခြုံစေရန် ခြွင်းချက်မရှိ အထူးအလေးပေးဆောင်ရွက်နေပြီး ၎င်းအချက်ကို နောင်တွင်လည်း ရုပ်သိမ်းသွားမည်မဟုတ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတိုင်း၏ ဆက်နွယ်မှုနှင့် အပြန်အလှန်သစ္စာရှိမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပိုင်ခွင့်ရှိပြီး လက်ရှိဥပဒေများ၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါဝင်သည့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်များအတွက် ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို ချွင်းချက်မရှိလိုက်နာရန် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအားလုံးကို လေးလေးနက်နက် အကြံပြုထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် လုံခြုံမှုတို့အတွက် လူသိရှင်ကြားအာမခံထားမှုများကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည့်အထောက်အထားရှိပါက စီမံခန့်ခွဲမှုများအားလုံးကို မူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်ထားရှိရန် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှုနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတို့အတွက် သင့်လျော်သောနစ်နာကြေးကို ဥပဒေကြောင်းအရတောင်းခံနိုင်သည်။